PressReader - Ilanga: 2018-11-08 - UTHISHA UBANGISWA ISIKHALA SOKUFUNDISA I- YIVOLONTIYA
UTHISHA UBANGISWA ISIKHALA SOKUFUNDISA I- YIVOLONTIYA
Ilanga - 2018-11-08 - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE mthobisis@ilanganews.co.za
KUXABENE ubendle eNcandu Combined School, eNormandien Hope Farm, eNewcastle ngenxa yombango wesikhala sokufundisa iMaths phakathi kothisha ababili okubikwa ukuthi basebenza esikhaleni soyedwa.
Ngokuthola kweLANGA, uthisha obefundisa iMaths kwaGrade 10, 11 no-12, uxinwe wukugula isikhathi eside waze wathola incwadi kadokotela ethi akasakulungele ukusebenza, wahamba esikoleni.
UMnyango wezeMfundo KwaZuluNatal uqashe uthisha oyibamba, uNkz Nokukhanya Mvelase, oqale ukusebenza kulesi sikhala ngoNhlaba (May) kwaze kwaphela inkontileka yakhe mhla ka-28 kuMandulo (September) kuwona lo nyaka.
Kuthiwa emuva kokuphela kwenkontileka yakhe, kufike umhloli esikoleni wathi sesiyelulwa isikhathi sezinkontileka kuze kube wunyaka ozayo kubona bonke othisha abangamabamba, okusho ukuthi sekuzoqashwa uthisha ngokugcwele ngonyaka ozayo - kumele uNkz Mvelase aqhubeke nokusebenza.
Ngokuthola kwaleli phephandababa, uthishanhloko uziqashele owakhe uthisha oyivolontiya. Umthombo ongaphakathi kulesi sikole, uthi uNkz Mvelase ujika nesihlalo njengoba zonke izimfanelo zakhe zingavuseleliwe, okwenze ukuba angaholi ngenyanga edlule.
“Njengoba sisebenza singothisha, yena uyahlala ekubeni enikezwe ilungelo lokusebenza esikoleni. Okuxakayo futhi wukuthi lo thisha okhishwe ngoba egula, ugcine eselandwa kwathiwa makazohlala nje emagcekeni esikoleni ekubeni engasakulungele ukusebenza.
"Kusize ukubhikisha kwabanye othisha ngoba bese kucacile ukuthi bathathu manje othisha esikhundleni soyedwa ovumeleke ukufundisa iMaths,” kusho umthombo.
Ngokuthola kwaleli phephandaba, kuvela ukuthi ngisho amaphepha eMaths okuhlolwa kwabafundi asethwe nguyena uthisha oyivolontiya, olandwe nguthishanhloko.
Ilungu lesigungu esilawula isikole, uMnu Joseph Motaung, lithi bayalwazi lolu daba nezinkinga ezikhona esikoleni.
Litshele ILANGA ukuthi izinkinga zangaphakathi ezithinta othisha nokwabiwa komsebenzi ziqhelelene nabo.
UMnu Kwazi Mthethwa okhulumela uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uthe akekho uthisha oyivolontiya oholelwa emnyangweni. "Uhlelo lukathishanhloko nalowo okuthiwa umqashile kasilwazi.
"Uthisha owayeqashwe yithina emnyangweni sicela asondele eduze kwethu nodaba lwakhe silusukumele noma axhumane nehhovisi lethu ngaphansi kwesifunda iMajuba,” kusho uMnu Mthethwa.